नेकपामा आकर्षणः स्कुल विभाग किन ?::Nepali News Portal from Nepal
नेकपामा आकर्षणः स्कुल विभाग किन ?
पार्टी एकीकरणको काम अन्तिम–अन्तिम चरणमा पुगिरहेका बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा अर्काे लफडा शुरु भएको छ । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी समूहले पार्टीभित्र आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न खोज्दा पार्टी एकीकरण प्रक्रिया अझै लम्बिएको छ । लामो समयपछि जिल्ला इन्चार्जहरुको टुंगो लगाए पनि विभागहरुको जिम्मेवारीका विषयमा भने पार्टीभित्र दिनानुदिन विवाद चुलिँदै गएको छ । नेकपाका ३२ वटा विभागहरु मध्ये १८ वटामा तत्कालीन एमाले र १४ वटामा तत्कालीन माओवादीले लिने सहमति भएपनि स्कुल विभागको टुंगो नलाग्दा चौध महिनासम्म लम्बिएको एकता प्रक्रिया झनै लम्बिने संकेत देखापरेको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक गृहकार्य नपुगेको र थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै सचिवालय बैठक पनि पटक पटक सारिएको छ ।
के हो स्कुल विभाग ?
पार्टीको वैचारिक एवम् शक्तिशाली विभागका रुपमा रहेको विभाग हो स्कुल विभाग । विशेषगरी पार्टीको वैचारिक पाटोसंग जोडिएको र पार्टीको आगामी कार्यदिशा तय गर्नका लागि पार्टीका नीतिनियम, सिद्धान्त तथा कार्ययोजनाहरु तयार गर्ने काम स्कुल विभागले गर्छ । अन्तरिम विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम नेकपाको नियमावलीमा केन्द्रीय स्तरका ३२ वटा विभाग रहने भनिएकोमा सोमध्येको एउटा अर्थात वैचारिक विभागको रुपमा स्कुल विभागलाई लिन सकिन्छ ।
के काम गर्छ स्कुल विभागले ?
स्कुल विभागका कर्तव्यहरु प्रष्टसंग नियमावलीमा खुलाइएको छ । मुख्यतः पार्टीको रणनीति, नियम, योजनाहरु बनाउने कार्य गर्ने स्कुल विभागका निम्नानुसारका कर्तव्यहरु नियमावलीमा उल्लेख गरिएका छन्ः– पार्टीका सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीति अनुरुप नियमित वा आवधिक पार्टी स्कुल सञ्चालन गर्ने र त्यसका निन्ति कार्ययोजना तयार गरी कमिटी समक्ष प्रस्तुत गर्ने । पार्टी सदस्यहरुको सैद्धान्तिक–वैचारिक स्तर उठाउन आवश्यक योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने । पार्टी स्कुलका निम्ति आवश्यक प्रशिक्ष्ँक तथा विशेषज्ञहरु तयार गर्ने । पार्टी स्कुलका पाठ्यक्रम तयार गर्ने, तदनुसार पाठ्यसामाग्री तयार गर्ने र सम्बन्धित पार्टी कमिटीको स्वीकृतमा प्रकाशन गर्ने । प्रशिक्षण कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने, प्रशिक्षार्थीहरुको परीक्षा लिने तथा प्रमाणपत्र दिने र सोको अभिलेख राख्ने । स्वदेश तथा विदेशका पार्टी स्कुलहरुसंग अनुभव आदान–प्रदान गर्ने । पार्टीमा एकीकृत भएका वा नयाँ प्रवेश गरेका सदस्यहरुलाई विशेष प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने ।
कसरी चुलियो विवाद ?
पार्टी एकीकरणको घोषणालगत्तै पार्टीको विचारधारा तथा कार्यदिशाको बहस गरम नहुने त कुरै भएन तर पछिल्लो समय यो विवादलाई थाँती राख्दै जनताको जनवादको लाइन उल्लेख गरिएको थियो । २१ औँ शताव्दीको जनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादको टुंगो आगामी महाधिवेशनले लगाउने भनिएपनि पछिल्लो समयमा ईश्वर पोखरेलले सार्वजनिक रुपमा नै जबजको व्याख्या गर्दै हिँडेपछि अध्यक्ष प्रचण्ड सशंकित बन्न पुगे र पार्टीको विवाद झनै चुलियो । पार्टीभित्रको वैचारिक सिद्धान्तलाई आफ्नो पकडमा राख्नको लागि गुटहरु तल्लीन भएकोले गर्दा नै नेकपाभित्रको स्कुल विभाग तारो बन्न पुग्यो । माओवादी सकिन लागेको भएर आफ्नो पार्टीमा विलय भएको सोच्ने पूर्वएमाले नेताहरुले स्कुल विभाग छोड्न नहुने तर्क गर्छन् भने पूर्वएमाले नेता ईश्वर पोखरेल जबजको विषयमा खुलेर चर्चा गर्न थालेपछि माओवादीले यो विभाग आफूसमक्ष राख्न चाहेको कुरा प्रष्ट छ । पार्टीले जनताको जनवादको लाइन समातेको हुनाले जनताको बहुदलीय जनवाद(जबज) को वकालत गर्दै आइरहेका पोखरेललाई नेतृत्व दिए पार्टीको नीति तथा सिद्धान्त माथि अन्याय हुने ठहर पूर्वमाओवादीमा छ । एकतापछि पार्टीले लिने कार्यदिशा, समाजवादको रोडम्याप के हुने भन्ने अन्योल भइरहेको बेला स्कुल विभागमा आफ्नो नेतृत्व राखेर दबाब सिर्जना गर्न तथा शक्तिको वर्चस्व कायम गर्न दुवैपक्ष्ँ तल्लीन रहेको हुँदा नेकपाको सचिवालय बैठकमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ ।
प्रमुखमा कसको कसको दाबी ?
सर्वप्रथम त स्कुल विभागको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्ने भन्ने सन्दर्भ नै टुंगिएको छैन । फेरिपनि जति जति विभाग गठनले लामो समय लिँदैछ, त्यति त्यति नै आकाङ्क्षीहरु बढ्दै गएका छन् । विभाग बाँडफाँडमा सहमति भएर स्कुल विभाग एमालेको भागमा परेको भएपनि रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नाम सार्वजनिक भएपछि नेकपाको नेतृत्व र कार्यकर्तापंक्ति उक्त कुराको विरुद्धमा खरो उत्रियो । सचिवालय बैठकमा ओलीले पोखरेलको नाम प्रस्ताव गरेपछि उक्त प्रस्तावलाई महासचिव विष्णु पौडेलले मात्रै समर्थन जनाएका थिए । फलस्वरुप पूर्वमाओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई स्कुल विभागको प्रमुखमा दाबी गरियो । हाल संसदमा पनि नरहेको र पार्टीमा पनि कुनै महत्वपूर्ण भूमिकामा नरहेको हुनाले श्रेष्ठलाई नेतृत्व दिनुपर्ने माग पूर्वमाओवादी पक्षको छ । नेकपाको सचिवालयमा रहेका नेताहरु प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम र रामबहादुर थापा बादलसमेत श्रेष्ठको पक्षमा छन् । दुवै पक्षले आफ्नो अडान नछोडेपछि स्कुल विभागको नेतृत्वका लागि नेताहरु झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, राम कार्की जस्ता नेताहरुको नाम सतहमा आयो । यद्यपी संगठन विभाग प्रमुखमा नेता वामदेव गौतम, विदेश विभागको प्रमुखमा माधव नेपाल र नीति तथा अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा झलनाथ खनालको नाममा लगभग सहमति भइसकेको छ । पछिल्लो समय त घनश्याम भुसाल, वेदुराम भुसाल लगायतका नेताहरु पनि आफूले स्कुल विभागको नेतृत्व पाउनुपर्नेमा जोड गरिरहेका छन् ।
के होला मध्यमार्गी बाटो ?
जबजको लाइन सार्वजनिक रुपमा खुलेरै वकालत गर्दै हिँडिरहेका पूर्वएमाले नेता ईश्वर पोखरेललाई पूर्वमाओवादी पंक्तिले एकरति पनि रुचाउँदैन । त्यस्तै पूर्वमाओवादीको नेतृत्वमा स्कुल विभाग सजिलै छोडिदिने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वएमाले नेताहरु देखिदैनन् । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले पोखरेललाई अर्काे विभागमा समेट्ने बताएपनि नेता पोखरेलले आफूले कुनै पनि हालतमा स्कुल विभाग नछोड्ने अडान लिएका छन् । यस्तो अवस्थामा स्कुल विभाग प्रमुखका लागि एउटा मध्यमार्गी बाटो अर्थात् उत्तम विकल्प हुन सक्छन्– पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वएमाले नेता झलनाथ खनाल । खनाल स्कुल विभागको लागि अनुभवी पात्रसमेत हुन् । उनी एमालेभित्रका माओवादीले मन पराउने नेताका रुपमा पनि चिनिन्छन् । माओवादीहरुप्रति नरम विचार राख्ने खनाल स्कुल विभागको प्रमुखको लागि उपर्युक्त पात्र बन्न सक्छन् तर ईश्वर पोखरेलको व्यवस्थापन कहाँ हुने ? नीति तथा अनुसन्धान विभागको नेतृत्व कसले लिने ? भन्ने सन्दर्भका प्रश्नहरु खडा हुन सक्छन् । माओवादी समूहले पोखरेललाई मन नपराउने भएकोले माधव नेपाल समूहका नेता सुरेन्द्र पाण्डेको नाम पनि स्कुल विभागको नेतृत्वको लागि प्रस्ताव हुन सक्छ । यदि ईश्वर पोखरेलले आफूले नेतृत्वमा दाबी छोड्दै नछोड्ने अडान लिए भने तत्कालको विवादलाई मत्थर गर्न स्कुल विभाग प्रमुख अध्यक्षको मातहत राखिने कुरा प्रष्ट छ ।
के हुँदैछ त गृहकार्य ?
जबजको लाइनलाई लिएर गाउँगाउँ पुग्ने बताउँदै आएका पूर्वएमाले नेता ईश्वर पोखरेलको नाम प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव गरेपछि विवादमा रहिरहेको सचिवालय बैठक कहिले बसेर पनि निष्कर्षविहिन बन्यो त कहिले सूचना टाँसेर स्थगित हुने अवस्थामा पुग्यो । सोलगत्तै धेरै छलफलहरु भए । यसैबीच पूर्वसमूहहरुका छुट्टाछुट्टै बैठकहरु भए र गुट उपगुटहरुपनि आआफ्नो छलफलमा व्यस्त रहे । तापनि कुनै नतिजा प्राप्त हुन सकेन र सचिवालय बैठक यही साउन २८ गते दिउसो ३ बजेसम्मका लागि स्थगित गरियो । सरकारका वहालवाला मन्त्रीहरु विभागको प्रमुख बन्न हुने वा नहुने भन्ने विषयमा पनि आन्तरिक छलफलहरु भइरहेका छन् ।
स्कुल विभाग त्यो महत्वपूर्ण विभाग हो, जहाँ पार्टीका सिद्धान्त निर्माणदेखि कार्यकर्ता प्रशिक्षणको रुपरेखा समेत तयार गरिन्छ । वैचारिक तथा शक्तिशाली विभाग भएकोले विभागको नेतृत्व गर्ने मान्छे योग्य, क्षमतावान, वैचारिक, दूरदर्शी तथा अनुभवी हुनु जरुरी छ । गलत व्यक्तिको हातमा विभागको नेतृत्व पुग्यो भने झन् गुट तथा उपगुटहरुलाई प्रश्रय हुने, कार्यकर्ताहरुको स्कुलिङ राम्रोसंग नहुने तथा पार्टीको विचारधारा, नीति, कार्यक्रम तथा सिद्धान्तको तहसनहस हुने कुरा स्पष्ट छ । यसकारण गुटगट स्वार्थ तथा भागबन्डालाई नजरअन्दाज गर्दै योग्य, क्षमतावान र वैचारिक नेतालाई स्कुल विभागको नेतृत्व सुम्पिएर समाजवादको आगामी कार्यभार पूरा गर्नतर्फ नेपाल कम्युनिष्ट पार्र्टी (नेकपा) लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
शहीदको अपमान किन ?
बैतरणीका लागि मत्र्यलोकबासीलाई पत्र !
रुकुम घटना : कानुनी शासनमाथि चुनौती